Mucjisadii Erling Haaland Oo Halkeeda Kasii Socota, Kooxihii Saxeexiisa Ka Gaabiyey Oo Mar Kale Murugoonaya Iyo Wacdarihii Uu Xalay Sameeyey Oo Uu Ku Galay Diiwaanka GERMANY %
By Badrudiin Mohamed	 On Jan 25, 2020
Xiddigii ugu hadal haynta badnaa bishii December ee Erling Braut Haaland ayaa mar kale garoomada ka dhigay wacdaro dib u xasuusiyey kooxo ay ugu horreyso Manchester United inay qalad weyn sameeyeen markii ay ka gaabiyeen saxeexiisa ee ay Borussia Dortmund u ogolaadeen inay gacanta ku dhigto.
Erling Braut Haaland oo kooxo badan oo Yurub ah lala xidhiidhiyey markii uu ka tegayey kooxdiisii hore ee RB Salzburg, waxa uu horraantii bishan ku biiray naadiga Borussia Dortmund ee horyaalka Bundesliga oo ciyaartii ugu horreysay ee uu u saftay uu saddexley ugu dhaliyey muddo ka yar 20 daqiiqadood markaas oo inta uu beddel kusoo galay uu saddex gool shabaqa Augsburg ku hubsaday.
Xalay ayuu mar kale sameeyey wacdaro kii hore oo kale ah, waxaanu beddel kusoo galay ciyaartii ay kooxdiisu 5-1 ku xasuuqday FC Koln, taas oo uu beddel kusoo galay qaybtii dambe, hase yeeshee uu toban daqiiqadood ku dhaliyey laba gool.
Haaland ayaa garoonka soo galay iyadoo ciyaartu tahay 3-1, culays badanna kooxdiisa saaran yahay, hase yeeshee waxa uu awood u yeeshay inuu shabaqa dhex dhigo laba gool muddo toban daqiiqadood ah, waxaanu goolkiisa koowaad saxeexay daqiiqaddii 77aad midka labaadna waxa uu ku daray daqiiqaddii 87aad.
Isla xalay, waxa Erling Haaland lagu qoray diiwaanka ciyaaryahannada naadirka ah ee soo maray horyaalka waddanka Germany ee Bundesliga oo uu ka noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee labadiisii ciyaarood ee ugu horreeyey ku dhaliyey shan gool.
Waxa intaas u dheer, in labada ciyaaroodba aan lagu soo bilaabin oo uu beddel kusoo galay.
Haaland oo ay hadda da’diisu tahay 19 jir, waxa uu kooxdiisii hore usoo dhaliyey 22-kii ciyaarood ee ugu dambeeyey 28 gool oo ay ku jiraan siddeed gool oo uu ka dhaliyey tartanka Champions League oo uu lix ciyaarood oo kaliya soo dheelay ka hor intii aanay Borussia Dortmund 17 milyan oo Gini ku iibsanin bishii hore
shax Laga Sameeyay Xiddigaha Serie A-da Ka Ciyaara Ee Ka Tagay Premier League, Waa Shax Wareer Ah
Macalin Quique Setién oo Si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Barcelona